"Zvinyorwa zvemwenje." Icho chinyorwa chinoshamisa icho chiri kutsvaira Japan. | Zvazvino Zvinyorwa
Zvakatorwa kubva pabutiro reAnglo-Saxon edition ye "Bakemonogatari", naNisio Isin, rakaburitswa neVertical Inc.
The "mabhuku akareruka"Kana"light novels"(ノ イ ト ル ル raito noberu, zvakare mafoni ノ ベ ranobevari mhando yemabhuku akajairika kuJapan, uye kusvika nguva pfupi yadarika asingaonekwe zvachose neWest, asi iri kuvhura mukaha mumusika unopfuura miganhu yenyika yaakabva. Izwi rekuti "light novel"ndeya wasei-eigo, ndiko kuti, kunyepedzera-chiAnglicism icho chinongoshandiswa muJapan, uye icho hachizivikanwe, kana kushandiswa nevanotaura mitauro yemutauro. Saka panomuka dambudziko hombe kutsanangura kuti ndeapi ari mabhuku akarerukasezvo zita pacharo rinogona kutsausa, uye kunyangwe maJapan pachawo ane dambudziko rekubvumirana pane zvarinoreva.
Kunyangwe munhu angafunga kuti ivo vanonzi "akareruka enhau" nekuda kwehurefu hwavo, izvi hazvisizvo, kubvira vanowanzove neavhareji yemashoko zviuru makumi mashanu, iyo ingangoenzana neAnglo-Saxon novel. Kune rimwe divi, vazhinji vane dura rakajeka uye girama kuti vasvike kune vateereri vadiki, asi haisi iyo dhinomineta yavo vese. Iyi poindi yekupedzisira inonakidza nekuti, kunyangwe zvave kurongerwa kushandisa izwi rekuti «achiri mudukuKuzvitsanangura, vaparidzi veJapan vanozeza, sezvo ivo vasingade kuvharwa kune imwechete demographic.
Pakupedzisira, iwe unofanirwa kunzwisisa izvo «light novel»Hakusi kunyora mabhuku (senge "sainzi ngano" kana "thriller«), Asi asi mhedzisiro yekufamba kwe Marketing inosimudzirwa nemakambani anozvitonga pamusika (mune mutoo wezvinoitika neDC neMarvel mune yeAmerican comics chikamu). Kunyangwe paine chinhu chakajairika kune ese akareruka enhau ayo, kunyangwe asina kujeka, anobatsira kuvaziva iwo: avo manga maitiro anovhara uye mifananidzo (Comic yeJapan).
1 Kwakatangira kwechiedza zvinyorwa
2 Pulp tsika mumashure mehondo Japan
3 Kuuya kwemireniyamu nyowani
4 Wedzera mukurumbira
5 Kuremekedza mwenje inovhenekera
6 Ramangwana rakajeka
Kwakatangira kwechiedza zvinyorwa
“Zvakafanana nehunhu hwake hwehunhu, nehunhu hunotonhora kumeso kwake, achiverenga mukona yekirasi. Yakananga pakuvaka masvingo akamukomberedza.
Senge zvaive zvakasikwa kuti avepo.
Senge zvaive zvakasikwa kusavapo pano. "
Nisio Isin, «Bakemonogatari, Monster Nhoroondo. »
Nhoroondo yezvakareruka zvinyorwa inodzokera kumashure magazini pulp ChiJapanese pakati pegumi nemakumi mashanu. Kufanana nevamwe vayo veAmerica, vakadai sevakakurumbira Weird Tales (iyo yawakanyora HP Lovecraft), Aive mabhuku ane fungidziro, sainzi ngano uye nematikitivha nyaya. Kunyangwe ipapo vanyori vemagazini aya vaive vakavhurika pesvedzero yekuMadokero (ivo vaiyemura zvakanyanya mabasa akadai se Zviuru makumi maviri zvemitambo yekufamba pasi pemvura, naJules Verne, uye Mhosva dzeRue MorgueNaEdgar Allan Poe).
Kubva panguva ino nguva Ogon Batto (1930), naTaboo Nagamatsu (akafunga seimwe yemagamba ekutanga munhoroondo, kunyangwe pamberi paBatman naSuperman), uye nemitambo yemutikitivha. Homura soroku (1937-1938), naSano Soichi (zvakajeka kufurirwa naArthur Conan Doyle's Sherlock Holmes). Zvakare, uye sevatangiri veiyo anowanzo chiJapanese mhando, paive nenyaya dze «mashiripiti vana«, Kana vana vane masimba, sezvakaitika kuna Madojiden (1916) naMurajama Kaita.
Tsika pulp muJapan yapashure pehondo
Mushure mekupera kweHondo Yenyika II muna 1945, uye zvichienderana nekuzvarwa kwema manga emazuva ano, magazini pulp kubva kuNyika yeKukwidza Zuva yakatanga kuve nehunhu hwayo, uye kuve nehukama nemusika wenyika wemabhuku enyambo. Pakazosvika ma70, ruzhinji rwemagazini aya rwakasiya mifananidzo yechinyakare vachida iyo manga uye anime aesthetics (YeJapanese akateedzana akateedzana). Kune rimwe divi, vaparidzi vakatanga kuburitsa mune yerudzi fomati idzo nyaya idzo dzakanyanya kufarira vateereri vavo.
Kavha yevhoriyamu yechipiri ye "Slayers" naHajime Kanzaka, "Iyo Svikiro reAtlas."
Shanduko huru yekutanga, iyo yakaisa hwaro hwechinhu chose chaizouya mushure, yakauya nekubudirira kukuru kwe Iyo gamba ngano yeAlslan (1986 zvichienda mberi), saga ye epic fantasy enganonyorwa naJoshiki Tanaka, uye kunyanya na Slayers (1989-2000), akafananidza misoro ye munondo nehuroyi zvetsika. Iyo yekupedzisira yakashandurwa kuita yemifananidzo yakateedzana, iyo muSpain yaizivikanwa se Reena naGaudi, uye yakaburitswa mukati memakore makumi mapfumbamwe.
Kuuya kwemireniyamu nyowani
«—Zita rangu ndinonzi Haruhi Suzumiya. Ini ndinobva kuEast High Chikoro.
Kusvika panguva ino zvakaratidzika kunge zvakajairika. Kutendeuka kuti ndimutarise kwaive kunetsa zvakanyanya, saka ndakaramba ndakatarisa kumberi. Izwi rake rakaenderera richiti:
"Handina basa nevanhu vadiki." Kana paine vatorwa, vafambi venguva kana "esper" vane masimba akaenzana pano, ngavauye vazondiona. Ndizvo zvose."
Izvo zvakaita kuti nditendeuke.
Nagaru Tanigawa, "Iyo kushushikana kwaHaruhi Suzumiya."
Kunyangwe nekutengesa kwakanaka kwemamwe mazita, musika wenyaya yemwenje waive uchiri mushoma kana uchienzaniswa nedzimwe nzira dzevaraidzo. Nekudaro, mu2003 kwakauya kurohwa kukuru kwakachinja panorama rake zvachose: kuburitswa kwevhoriyamu yekutanga ya Iko kushushikana kwaHaruhi SuzumiyanaNagaru Tanigawa, nyaya yesainzi fungidziro, zvakavanzika, uye zviitiko zvakajairika.
"Zvinonetsa zvaHaruhi Suzumiya", vhoriyamu yechitanhatu yebasa raNagaru Tanigawa.
Munyori uyu aive abudirira zvisati zvamboitika, achivhura magonhi evanyori votevera kuti vatevere mumakwara ake, nekuita kuti vaparidzi vaone bhizinesi mune ino fomu yehunyanzvi. Muna 2007, vhoriyamu yekutanga ye Haruhi Suzumiya yakanga yatengesa makopi anopfuura mamirioni mana, uye zvakazara zvakadhindwa 16,5 mamirioni emakopi akateedzana munyika gumi neshanu, Mamirioni masere muJapan moga.
Kubva pahwindo reimba yenhare, maziso maviri ejedhi akatarisa zvidiki zvimiro zvababa nemwanasikana vachitamba pamusuwo wesango.
Mhandara, yakamira pahwindo, yaive kure nekutaridzika seisina simba kana kupfuura. Aive nevhudzi rakareruka, rakatsetseka bvudzi, uye aipfeka rokwe rekare-raimonera muviri wake mutete. […] Aive mumwe munhu aiita senge asingakwanise mamiriro echando eruzha rweEinsbern.
"Wakatarisa chii, Saber?"
Irisviel paakadaidzira kwaari ari kumashure, mukadzi wechidiki pahwindo akatendeuka.
- Kuna Kiritsugu nemwanasikana wako, vari kutamba musango. "
Pashure Haruhi Suzumiya, Mamwe mazita akabuda akawana vateereri vavo pachavo. Tinogona kudoma nyaya ye Mugumo Zero (2006-2007), naGen Urobuchi, a thriller rima fungidziro yepfungwa. Chaizvo, 2006 yakaratidza kumuka kwechiedza zvinyorwa, iyo yakawedzera kutengesa kwayo gore rimwe nerimwe, ichiwana chizvarwa chose chevechidiki vechiJapan (uye ichiwedzera kubva kune dzimwe nyika) kuti vawane kunakidzwa kwekuverenga.
Kuvhara mavhoriyamu mana e "Fate Zero", naGen Urobuchi.
Rondedzero yemabasa nevanyori yakareba, mune svikiro iro rave rakakura kwazvo, zvekuti zvakaoma kuvapa mazita ese. Iko kune akareruka enhau ezvose zvido: komedhi, mutambo, kudanana, eroticism, sainzi ngano, fungidziro, mapurisa ... Kutumidza mashoma Zvinonhuwira uye Wolf (2006), naIsuna Hasekura; Toradora! (2006-2009), naYuyuko Takemiya; Sword Art Online (2009 zvichienda mberi), naReki Kawahara; Hapana Mutambo Hakuna Hupenyu (2012), naJuu Kamiya; Re: Zero (2012 zvichienda mberi), naTappei Nagatsuki; KonoSuba (2012 zvichienda mberi), naNatsume Akatsuki; Yojo Senki (kubvira 2013), naCarlo Zen; kana Goblin Slayer (kubvira 2016) naKumo Kagyu. Aya ese saga anozivikanwa, sezvo zvave zvichikwanisika kufungidzira, nehurefu hwayo, huwandu hukuru hwemavhoriyamu, uye nekugadziriswa kune akasiyana akateedzana ehupenyu.
Kuremekedza mwenje inovhenekera
Kunyanya kutaurwa kwakakodzera basa remunyori Nisio Isin (inowanzo nyorwa se NisiOisiN, kusimbisa kuti zita rake palindrome), inofungidzirwa nevatsoropodzi vazhinji seimwe yevanogadzirisa zvikuru svikiro mumakumi emakore apfuura. Maitiro ake anozivikanwa nekuzvisarudzira, kusanganisa mutambo uye komedhi, achidzokorodza rusvingo rwechina, hurukuro refu, zvinyorwa zvakaomarara, uye vakadzi vanotsigira vane hunhu hwakasimba, hunhu hwakasimba, uye psychology yakaoma.
"" Ah, ndaona, "Senjougahara akagunun'una, achinzwika kupererwa. Ini ndanga ndichironga kukuitira mhando dzese dzezvinhu kana ndikawana mukana Izvo zvakashata.
"Zvinonzwika senge kumwe kurangana kunotyisa kuseri kwemusana wangu ..."
-Kuhura kwakadii. Ini ndanga ndichingoenda ku &% mune yako - - mushure me * ^ ipapo.
-Uye ndaida kukugadzira izvi y izvo zvakare.
"Chii chiri pasi pemutsetse chinofanirwa kuratidza?!"
Kubva kune uyu munyori akasimba tinogona kuratidza mabasa akadai se Zaregoto (2002-2005, chakavanzika, kufungidzira, uye kuuraya zvinyorwa), Katanagatari (2007-2008, adventures yemunondo asina pfumo) uye, pamusoro pazvose, kukunda kwake kukuru: saga Monogatari (Kubva 2006, rinoreva "nhoroondo", kuteedzana kwenyaya dzinopindirana nehunhu hweprosaic neyekufungidzira kwakanyanya.
Kavha yeAnglo-Saxon chinyorwa che "Nekomonogatari Shiro" ("Nyaya yekati chena"), naNisio Isin.
Nhasi, kana tikatarisa nhamba, mwenje inoverengeka musika iri kuwedzera bhizinesi. MuJapan yakasimbiswa kwazvo, uye inoshandisa vapepeti vazhinji, vanoverenga, vanyori, uye vafananidzi, vekupedzisira vari, kazhinji, vanozivikanwa kwazvo mifananidzo yemifananidzo yezvivakwa zvakaita sePixiv. Kunze kwenyika yavo yavakaberekerwa, vari kuwana vaverengi vakawanda muAnglo-Saxon nyika, sezvo mazhinji emabasa anozivikanwa anodudzirwa muChirungu. Kune rimwe divi, ivo vari kutanga kupinda mumusika unotaura chiSpanish, kunyangwe vachitya, vachibhejera sePlaneta neshanduro yayo Re: Zero.
Ndinovimba vaparidzi vachakurumidza kuziva izvozvo light novels ane vateereri, akatendekawo, uye , que inokoshesa chokwadi chekutenga kupfuura vamwe vaverengi muchimiro chemuviri mabasa ako aunofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » "Zvinyorwa zvemwenje." Icho chinyorwa chinoshamisa icho chiri kutsvaira Japan.
Juan Carlos Guzman akadaro
Zvese zvakanaka, chinyorwa chakanaka. Semunhu anoverenga enganonyorwa, ndinoziva kuti ndaizoda kunyatsoaverenga panyama, asi zvinotora basa. Muchokwadi pane imwe yandinoda kunyanya, iyo iwe yausina kupa kutaurwa kunyangwe uchinyanya kuve nemukurumbira, chikoro chepamusoro dxd. Nhoroondo inonetsa kuti nyika isiri yeAsia ishandure: 'v
Pindura Juan Carlos Guzmán
MRR Escabias akadaro
Zvinonakidza semaitiro aRias Gremory, handifunge kuti ndicho chinhu "chemhuri chinoshamisira" chandaigona kunge ndataura nezvacho (isa kuseka).
Pindura kuna MRR Escabias
Bortolomé VL akadaro
Chinyorwa chinonakidza. Ini ndaiziva kuti Haruhi Suzumiy akagadzirisa hupenyu, asi ini ndakanga ndisingazive kuti yaive futi pfuti yekutanga yemabhuku enhau kuve musika wakakura kudaro.
Pindura Bortolomé VL
Iniwo ndakashamisika pandakaita ongororo yangu. Ndiri kufara kuti wakafarira chinyorwa.
Joel Esteban Clavijo Pinzón akadaro
Chinyorwa chakanaka sei. Ahhhhh, ndiri kutarisira kwazvo kuverenga iyo Re: Zero novels. Ndakatotanga kuverenga webhu inova, asi hazvina kufanana nekuve nebhuku, nemifananidzo yevatambi, mumaoko ako, uye kuriverenga munyaradzo yepaki, kana imba yako wega ... Zvinonzwisa tsitsi izvo , muJapan, usaise mabhatiri ekuhaya vashanduri uye nekuwedzera musika weiyi huru nhevedzano.
Pindura kuna Joel Esteban Clavijo Pinzón
M. Escabias akadaro
Mashoko ako anokosheswa, Joel. 😀
Pindura kuna M. Escabias
Rodrigo Diaz akadaro
Chinyorwa chakanaka, ikozvino kutarisira kuti ichi chinyorwa chiitiko chinotsvaira nyika zvakare!
Uye ndinobvunza kuti:
Nei uchifanira kungogarira maJapan enhau akareruka? Ndiri kureva, kuMadokero kune vanhu vazhinji vangade kuita anime (asi hapana indasitiri pano). Kumadokero, kune vanhu vazhinji vangade kugadzira manga (asi hunyanzvi hwekukweva uye, pamusoro pezvose, nzvimbo dzekutsikisa hachisi chinhu chinowanikwa nevazhinji). Uye iyo yakanaka poindi, kuMadokero kune vanhu vazhinji vanoshuvira kuti vangangoburitsa zvinyoro zvinyowani (uye zvinoitika kuti hapana zvipingaidzo zvakakomba, nekuti kunyora, zvirinani pamhepo, kuri mukati mekusvika kweanenge chero munhu. gadzira nzira inoenda kwairi senge muJapan).
Pane chero munhu anoziva kana izvi zviri kuitwa kana nei zvisingaiti? Ndiri kureva, zvakajairika kuti zvinyorwa zvepanyama hazviburitswe kana kuti vanhu vanotoita mari izvozvi. Asi online nderemahara, zvirokwazvo munyika inotaura chiSpanish panogona kunge paine vanhu vazhinji vanoda. Uye kana izvi zvaizobudirira (izvo zvandisiri kuona chakaremara chakajeka), chimwe chinhu senge muJapan chaigona kubuda. Pane chero munhu kana paine chero chikuva chakadai, anonyatsoburitsa yakajeka mwenje kana chimwe chakadai. Uye kana zvisiri, chero zano nei pasina?
Pindura kune chero munhu
Yepedyo iwe yaunowana kune iyoyo Wattpad, inova yekushandisa uye peji rewebhu uko vanhu vanoburitsa mabasa avo ekuverenga mahara uye chero maitiro, zvisinei hakuna mifananidzo saka zvingave zvakaoma kuburitsa bhuku nyoro mune ino svikiro.
Rene Driotes akadaro
Chinyorwa chinonakidza kwazvo, kunyanya nekuti iwo musoro wenyaya kwandiri. Ndine mibvunzo miviri maererano nemusoro wenyaya wandinoda kuti upindure.
1. Ko "maNovel echiedza" anongoshanda kunguva dzazvino here kana kuti munhu anogona kunyora achinongedzera kuJapan yekare?
2. Ndinofanira here kuva munyori wechiJapan kuti ndipinde murudzi urwu rwemusika?
Pindura Rene Driotes
Yakanaka chinyorwa, kunyanya kuve nyaya iyo kusvika parizvino yanga isingazivikanwe kwandiri. Ndine mibvunzo miviri:
1. Iwe unogona chete kugadzira "Chiedza chivheneko" kubva panguva dzazvino kana iwe unogona kugadzira imwe kubva kuJapan yekare?
2. Ndinofanira here kuva munyori wechiJapan kuti ndipinde mumusika werudzi urwu rwemabhuku?
Ndinoda kuziva: Uri kuronga kunyora akareruka enhau echiLatin America mavambo?
Ini ndiri munyori weinotsikisa imba ine hunyanzvi mumabasa aya uye ndinoda kupa kana zviri izvo zvauri kuronga kutaura nezvazvo.
Pindura kuna Daysha_109
"Cyrano de Bergerac." Edmond Rostand's gamba mutambo.